Autonomic Neuropathy (အလိုအလျောက်အာရုံကြောစနစ် ချို့ယွင်းခြင်း)
on: 08 Oct, 2017
အကျဉ်းရှင်းလင်းချက်အလိုအလျောက်အာရုံကြောစနစ် ချို့ယွင်းခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သော သွေးပေါင်ထိန်းညှိခြင်း ၊ ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်ထိန်းပေးခြင်း ၊ အစာချေဖျက်ခြင်း ၊ ဆီးသွားခြင်း ၊ ကာမဆက်ဆံခြင်းတို့တွင် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိခိုက်ပျက်စီးသွားသော အာရုံကြောသည် ဦးနှောက်နှင့် ကိုယ်တွင်းကလီစာများကြားဆက်သွယ်မှုကို နှောင့်အယှက်ပြုသည်။လက္ခဏာများထိခိ...
ဆီးချိုရောဂါကြောင့် ခြေထောက် ဂရုစိုက်ခြင်း၊ မဖြတ်ရရန်ကာကွယ်ခြင်း
ဆီးချိုရောဂါကို သေချာစွာကုသခြင်းနှင့် ခြေထောက်ကို ဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့် ခြေထောက်တွင် အနာဖြစ်ခြင်းကြောင့် အနာကုမရခြင်း ပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ကာ ခြေထောက်ဖြတ်ရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ဆီးချိုရောဂါကို သေချာစွာကုသခြင်းနှင့် ခြေထောက်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းကို ဘာကြောင့်အရေးကြီးပါသလဲ။ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးခဲ့သော နှစ် ၂၀ အတွင်းတွင် ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရသော သူများ၏ ၅၀% ရာခိုင...
ASO တက်တိုင်း လေးဖက်နာ ဖြစ်တာလား?
ASO တက်တိုင်း လေးဖက်နာ ဖြစ်တာလား?မဟုတ်ပါ။ ASO ပုံမှန်ထက်များတိုင်း လေးဖက်နာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ Jones Criteria အရ ASO တစ်ခုတည်း တက်ရုံနဲ့တော့ လေးဖက်နာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဖျားနာခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်များ ညောင်းခြင်း၊ ကိုက်ခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ယခင်က လေးဖက်နာဖြစ်ဖူးခြင်း၊ နှလုံးဝေဒနာများရှိခြင်း၊ အရေပြားအောက် အလုံးအကျိတ်များပေါ်ခြင်း၊ ESR သို့မဟုတ် C reactive potein များနေခြင်း စတဲ့လက္ခဏာများ ရှိ...
Acute lymphoblastic leukaemia (ALL) သွေးကင်ဆာ
Acute lymphoblastic leukaemia မှာ ဆိုးရွားသော အခြေအနေသို့ မရောက်မီ ရောဂါလက္ခဏာပေါ်နှုန်းမှာ အနည်းငယ်နှေးသည်။ရောဂါလက္ခဏာအများစုမှာ သွေးထဲတွင် အရွယ်မရောက််သေးသော သွေးဖြူဥများ များနေပြီး ကျန်းမာသော သွေးဖြူဥများနည်းနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ရောဂါလက္ခဏာများ - ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်ခြင်း၊- ပင်ပန်းလွယ်ခြင်း၊ မောခြင်း၊- ဖျားခြင်း၊ ချွေးထွက်များခြင်း၊...
လက်ကောက်ဝတ်အတွင်းရှိ အာရုံကြော (Median Nerve) ကို ဖိမိခြင်းကြောင့် လက်ဖဝါးနှင့် လက်ချောင်းများတွင် ထုံခြင်း၊ ကျဉ်ခြင်းနှင့် တခါတရံ နာကျင်ခြင်းကို Carpel tunnel syndrome ဟုခေါ်သည်။လက္ခဏာများCarpel tunnel syndrome ၏ ရောဂါလက္ခဏာများမှာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီး ညဘက်နှင့် နံနက်စောစောတွင် ပို၍ဆိုးတတ်သည်။အများအားဖြင့် လက်မ၊ လက်ညှိုး၊ လက်ခလယ်န...
သွေးချိုရောဂါ နှင့် အဝလွန်ခြင်း ( Diabetes Mellitus and Obesity )
သွေးချိုရောဂါသည် အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပက်သတ်မှုရှိသည်။ အဝလွန်သူများသည် သာမန်လူများထက် အမျိုးအစား(၂) သွေးချိုဖြစ်ရန် သုံးဆမှ ရှစ်ဆအထိ ပိုများသည်။ ပိုဝလေ၊ ပိုဖြစ်နိုင်လေ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန် ၂ ကီလိုဂရမ် (၄.၄ပေါင်) တက်တိုင်း သွေးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်လာသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် အနည်းငယ်ဝသူများ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ အတော်အသင့် ဝသူများ၏ ၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အလွန်အကျွံဝသူများ...
ယောဂ (Yoga) ၏ သမိုင်းအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်လျှင် ရှေးအခါက အိန္ဒီယလူမျိုး များသည် စိတ်တည်ငြိမ်မှုနှင့် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုရရှိရန် ယောဂကျင့်စဉ်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများသည် စိတ်ဖိစီးမှုများ ပြေပျောက်စေရန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပျော့ပျောင်းနိုင်စေရန်တို့အတွက် ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများကို လိုက်ပါလုပ်ဆောင် ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်သ...
နမိုးနီးယား (သို့မဟုတ်) အဆုတ်ရောင်ရောဂါ
အဆုတ်တစ်ဖက် (သို့) နှစ်ဖက်လုံးရှိ လေအိတ်များပိုးဝင်ပြီးရောင်ရမ်းခြင်းကို အဆုတ်ရောင်ခြင်း ဟုခေါ်ပါသည်။ အဆုတ်ရောင်ရောဂါဆိုတာ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်သာမက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၊ မှိုရောဂါ တို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဆုတ်ရောင်ရောဂါမှာ ပြင်းထန်အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိပြီး အဆုတ်ရောင် ရိုးရိုးမှသည် အသက်အန္တရာယ်ရှိသည့် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါအထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဆုတ်ရောင်ရောဂါသည်များသော...
နှာခေါင်းနောက်ပိုင်းကင်ဆာ ( Nasopharyngeal carcinoma )
နှာခေါင်းနောက်ပိုင်း ( Post-nasal space ) သည် အာခေါင်အပေါ်ပိုင်း နှင့် တဆက်တည်းဖြစ်သည်။ အာခေါင်အပေါ်ပိုင်းနေရာဟု ခေါ်နိုင်သည်။ ယင်းနေရာသည် ဦးနှောက်အာရုံကြော၊ ဦးနှောက်ခွံ၏ အခြေနှင့် နီးသည်။ဖြစ်ပွားမှု နှာခေါင်းနောက်ပိုင်း ကင်ဆာရောဂါ ( Nasopharyngeal carcinoma ) သည် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် အဖြစ်များသည်ကို တွေ့ရသည်။၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း...
နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါ ( Cardiomyopathy )
on: 06 Aug, 2017
နှလုံးကြွက်သားရောဂါများဖြစ်ပြီး တွဲဖက်၍ နှလုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါကို အမျိုးအစားအလိုက် နှစ်အုပ်စုခွဲခြားထားသည်။၁။ အတိအကျဖြစ်သော နှလုံးကြွက်သားရာင်ရမ်းခြင်း ရောဂါ၂။ နှလုံးရောဂါအခြေခံဖြစ်သော နှလုံးရောင်ရမ်းခြင်း ရောဂါ၁။ အတိအကျဖြစ်သော နှလုံးကြွက်သားရာင်ရမ်းခြင်း ရောဂါ* နှလုံးအဆို့ရှင်ရ...